Heerka Sarrifka Sterling pound (GBP) In Oo shilin Soomaali (SOS) ku nool suuqa sarrifka Forex
Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 12:21
Sterling pound - Oo shilin Soomaali qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
12:21:06 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 GBP = 732.07 SOS
Isha isha Sterling pound to Heerka isweydaarsiga Oo shilin Soomaali waa sarrifka Forex. Bedelka Forex ee 1 Sterling pound waxaad u baahan tahay inaad bixiso 732.07 Oo shilin Soomaali. Cusboonaysiinta heerka beddelaadda 30 sekan kasta. Isbedelada Sterling pound to Oo shilin Soomaali sicirka Forex waxaa loo arki karaa waqtiyo kala duwan.
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali - Sterling pound ku nool yihiin, 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex Sterling pound In Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Websaydhka waxaad ka heli kartaa shaxanka Sterling pound to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka dusheeda 24 May 2022. Shaxanka kor ku xusan waa muuqaal muuqaal ah oo ah Sterling pound to Oo shilin Soomaali. Ka eeg isbeddelada sicirka degdega ah ee shaxanka. U adeegso jiirka si aad u doorato waqtiga saxda ah ee shaxanka oo aad u ogaato Sterling pound sarrifka lacagaha ee Forex waqtigan.
Beddelaan Sterling pound In Oo shilin Soomaali Sterling pound In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Sterling pound In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online Sterling pound (GBP) si Oo shilin Soomaali xilligan
Waxaan tusinaa heerka is-weydaarsiga min daqiiqad ilaa daqiiqad. Dhaqdhaqaaqa Sterling pound ( GBP) ku Oo shilin Soomaali daqiiqaddan. Taariikhda sarrifka daqiiqadaha ugu dambeeya ayaa lagu muujiyey jadwalka. Way ku habboon tahay in la isbarbar dhigo isbeddelada daqiiqad kasta.
732.07 732.18 732.20 732.11 732.36 732.55 732.43 732.33 732.44 732.18
Ganacsi Online Sterling pound (GBP) si Oo shilin Soomaali ganacsi ee la soo dhaafay saac
Isbedelka ku yimid Sterling pound ee ku Oo shilin Soomaali waa la daawan karaa saacad kasta. Dhaqdhaqaaqa Sterling pound ( GBP) ku Oo shilin Soomaali saacadan waa - 1.70 SOS. Shaxdu waxay muujineysaa heerka Sterling pound si Oo shilin Soomaali saacad walba. Ka eeg xogta sicirka bedka 10 saacadood shaxda ku taal boggan.
732.11 732.18 731.95 725.96 731.17 731.55 730.54 730.42 730.53 730.19
Ganacsi Online Sterling pound (GBP) si Oo shilin Soomaali arrimuhu maanta 24 May 2022
12:21 11:21 10:21 09:21 08:21 07:21 06:21 05:21 04:21 03:21
732.07 730.17 729.35 729.08 728.60 729.49 729.69 729.68 733.69 734.89